Ny toerana be dia be izao dia ahitana an'i Ozbekistan
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny toerana be dia be izao dia ahitana an'i Ozbekistan
Inona no toerana mahaliana hotsidihina raha mpandeha matetika ianao? Mihabetsaka hatrany ny valintenin'ny mpandeha ao Ozbekistana.
Ampahany isan-jaton'ny mpitsidika ihany no miala avy any Bukhara, Samarkand, ary Tashkent: ny trio amin'ny tanànan'ny Silk Road izay nanjary kanto nandritra ny vanim-potoana tamin'ny taonjato faha-16, rehefa nividy, nitatitra ireo mpivarotra, avy eo nivarotra entana lafo vidy toa ny landy, zava-manitra ary volamena eo anelanelan'i Venise mankany andrefana ary Beijing any atsinanana. Ireo tanàna telo ireo dia mandentika ny ankamaroan'ny mpitsidika fito tapitrisa ao Ozbekistan, ary izany dia noho ny andiany fahitalavitra Joanna Lumley ao amin'ny Silk Road.
Androany, Tashkent dia manana ny fiara rehetra ao an-drenivohitra maoderina. Ny tranony, ny ankamaroan'izy ireo dia natsangana taorian'ny horohorontany nandrava 1966, dia tsy misy soratra fa voaloa amin'ny ala maitso sy sisin-tanety feno ala. Ny metro koa dia manintona. Ny lafiny mamorona kokoa an'ny asan'ny Firaisana Sovietika dia hita isaky ny fijanonana misy foto-kevitra nitazomana hatramin'ny nahaleo tena an'i Ozbekistan indray tamin'ny taona 1991. Nihinana amina marika 10c aho, nivezivezy teny amin'ny tontolo andro aho, toy ny fihazana harena ara-javakanto.
Samarkand, izay nanomboka tamin'ny taonjato fahafito talohan'i JK, dia azo inoana fa faran'ny làlana landy, feno moske mahatalanjona sy tranobe be pitsiny, izay hita ao amin'ny faritry ny faritr'i Registan, sy ilay Shah-i feno turquoise. -Zinda nekropolis.
Bukhara koa dia ny zavatra rehetra ampifandraisinao amin'ny Uzbekistan tokana: ny lova silamo dia mifanipaka amin'ny fanjakan'ny sovietika izay toerana miharihary fa manan-karena. Ny tanàna taloha dia tototry ny maritrano kanto ka nitomany indroa aho: indray mandeha tao amin'ny lapan'ny emir farany Sitorai Mohi Hosa, satria voaravaka kanto fotsiny, ny faharoa ao amin'ny kompana Po-i Kalan misy trano tamin'ny taonjato faha-16, ho an'ny ambaratonga rehetra amin'izany.
Ireo sy ireo tranonkala hafa dia arovan'ny Unesco, izay manampy ny lazany fotsiny. Ao amin'ny plaza afovoan'i Lyabi-Hauz, eo anelanelan'ny ohatra tsara amin'ny moskea, sy ny famantarana marobe amin'ny hotely ary ny bazaar miorina amin'ny dome, ny fiantsoana hoe "Scarves! Palitao! Jewelry! Saika afaka! ” miavaka, satria mampiseho ny fahatsiarovany sy ny peta-kofehy ireo mpivarotra amboara ho an'ireo mpividy mety hitranga.
Ny fameperana visa ho an'ny firenena eropeana dia nihatsara fito volana lasa izay - Afaka mahazo miditra tsy misy korontana izao ireo manana pasipaoro irlandey - ary tsy tonga amin'ny tabataban'ny fahatsapana marobe any Istanbul na Marrakech izany, saingy tsy nampoiziko hoe hanjakan'ny mpizahatany io faritra io. mbola izao.
Ho eny amin'ilay lalana nokapohina
Ny ambanivohitra Uzbekistan dia fanefitra. Any amin'ny firenena lehibe toa an'i Espana dia tsy vitsy ny toerana ivelan'ny lalana voasedra, hiaina ny hatsaran'i Uzbekistan amin'ny maha-azo itokiana azy. Any andrefana dia misy scapes lavitra (ny fomba fambolena landihazo notarihin'i Sovietika tany Ozbékistan, ka manimba ny famatsian-drano, vao nanampy an'io). Any atsinanana, ny Lohasahan'i Fergana dia malaza amin'ny asa-tanany nentim-paharazana. Toy ny tantaran'ny fiainantsika taloha izay namboarina ho hira sy tononkalo, eto, ny tantara dia voarary ara-bakiteny ao anaty karipetra sy peta-kofehy amin'ny rindrina, miaraka amin'ny marika sy ny endriny tsirairay misy dikany miafina. Ny vorona dia mariky ny fandriam-pahalemana, ny ampongabendanitra dia midika fahavokarana, ary ny amygdala dia midika fiarovana.
Ny fiviliako manokana no mora indrindra: nidina ny fiaran-dalamben'i Ozbekistan nijanona teo alohan'ny Bukhara, any amin'ny faritra afovoan'i Navoi aho (indraindray nosoratana hoe Navoiy - mbola tsy hilamina ny tsipelina anglisy), nomena ny anarany Alisher Navoi (y) , ny Shakespeare any Ozbekistan. Tashkent dia manana trano famakiam-boky lehibe antsoina hoe azy, ary misy fijanonana metro natokana ho azy, fa ny voninahitra lehibe kokoa dia ity faritry ny fahalalahana ity, miaraka amin'ny fahatsapana any ambanivohitra, tendrombohitra mihitsoka, ary olona mafana sy mandray olona.
Raha jerena ny ampahany amin'ny tany efitra, ny fanandramana Navoi araka ny tokony ho izy dia tokony hiditra amina hetsika vitsivitsy any an'efitra. Ka rehefa avy nitondra fiara lavitra - faharatsiana ilaina amin'ireo faritra ireo aho - dia manandrana mitaingina rameva aho. Famerenana teny efatra: fanombohana sy famaranana tsy maharitra.
Taty aoriana, nandany ny alina tao amin'ny Safari Yurt Camp aho nanandrana nanandrana ny fomba niainan'ireo mpifindrafindra monina Kazakh, fa miaraka amina mpamily fanampiny, tohodrano fidiovana tandrefana, lambam-pandriana ary sakafo telo-course. Manampy ireo fampiononana ireo, sarotra ny tsy ho voasarika avy hatrany. Nivoaka avy tao anaty fiara aho, nahita ny Milky Way eny amin'ny lanitra amin'ny masoko miboridana, ary ny lavitra, ny vahiny sisa voahodidin'ny afo amin'ny maha-mpihira tokana sy feon-gitara azy amin'ny alina, manome ahy iray manontolo karazana mozika vaovao hanadihadiana amin'ny fiverenako.
Akaikin'ny tanàna lehibe any Nurata no misy an'i Chashmar Spring, toerana fivahinianana masina iray monina manodidina ny lohataona voajanahary izay feno trout mamono ny mineraly ao aminy. "Niforona ny lohataona rehefa tonga nitory ny finoana Silamo ny imam voalohany, Hazrat Ali," hoy i Said Fayzulloh, arkeolojista iray eo an-toerana, rehefa nasehony ny vondrona misy ahy manodidina ilay faritra. “Nokapohiny tamin'ny tany ny tehiny, ary nipoaka ny loharano tany amin'ity tany efitra ity. 430 litatra no mitsimoka isaky ny segondra. ”
Taty aoriana, rehefa nitaingina bisikileta Rosiana tafaverina tamin'ny laoniny i Said, dia nianika ilay havoana teo an-tsisin'ilay kompana aho, rehefa nivadika ho mavo mavo ny masoandro nony hariva. Ankoatry ny mpivaro-tena mivarotra firavaka tsara tarehy, tsy misy fanahy azo jerena. Fiakarana fohy sy lava avy eo, eo amin'ny toerana hijerena tsara indrindra ao an-tanàna aho, manadihady ny faritra an-tanàn-dehibe amin'ny lafiny iray, ary ny Tendrombohitra Nuratau etsy ankilany.
Tahaka ny nivadihan'ny ora volamena 24-karat, tonga tany amin'ny rava trano mimanda aho, inoana fa nataon'i Alexander Lehibe, izay nandany roa taona nandresy ilay faritra. Ny asany dia hita ihany koa ao anaty tionelina rano akaiky: rafitra ambanin'ny tany ampiasaina hitondrana ny entana sarobidy avy any an-tendrombohitra mankany amin'ny tanàna. Mifanaraka amin'ny feon'i Ozbékistan fa tsy misy dikany izy io ary tsy misy marika, any an-dafin'ny trano fiompiana ambanivohitra izay misy vehivavy antitra iray, volo mifatotra fatratra amin'ny lamba, mipetraka eo amin'ny seza ary misintona ny ambadiky ny omby mahaky.
Hitany fa mampihomehy tanteraka izy rehefa manintona ahy ny manatona azy. Rehefa avy nandà ny diany izy ary, ny mampalahelo kokoa, ny fandavana ny fanasany hisakafo hariva, dia namoaka lovia katika, yaorta voajanahary toy ny Uzbek, ny vadiny, mba hahafahako maka tahaka ny valiny farany.
Mampiavaka ity vignette amin'ny fiainana andavanandro ity ary ny any aoriana dia tendrombohitra mavo volamena raha ny fahitan'ny maso azy. Ny fijanonana rehetra mandritra ny fitsidihako dia mampiseho fahitana miavaka, na ny hatsaran-tarehy tsy voadona ao amin'ny farihin'i Aydar, moske efa an-taonany maro mamirapiratra miaraka amin'ny haingon-trano mahatalanjona, na ny ankizy mihomehy mihazakazaka amin'ny sarety mamaky ny tsenan'ny sakafo be atao. Miverina toy ny toerana mafana ho an'ny mpandeha i Azia afovoany noho ireo tantara sy kolontsaina manan-danja eran-tany ao anatiny. Fa na eo amin'ny ambaratonga ambonin'izany aza dia tena manaitra.
Any Azia Afovoany no misy ny firenena mitazona an'i Uzbekistan izay misy sisin-tany dimy hafa. Azo antoka ihany izany - mahavita mandehandeha irery alina, ohatra, ny vehivavy. Mampiasa ny Som izy, ary € 1 dia 10,000 SOM - ka zahao amin'ny zero indroa ny zerô rehefa mandoa. Tsy mila visa ho an'ny teratany EU.
Tsy meloka ny Tale jeneralin'ny Birao Afrikana Tatsimo ary hanohy ny asany
Nihovotrovotra mafy ny nosy mpizahatany tany Filipina